कुकुरले खुट्टा उचालेर पिसाव गर्नुको यस्तो छ कारण ! - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
कुकुरले खुट्टा उचालेर पिसाव गर्नुको यस्तो छ कारण !
कुकुरले पिसाब गर्दा जहिले पनि कुनै रुखको फेद, गाडीको टायर, खम्बा, भित्ता वा कुनै नकुनै केहि वस्तु माथि यो अनिवार्य नियम हो । त्यसैले हामीलाई यो कुरा सामान्य नै लाग्छ । कुकुरले यसरि पिसाब फेर्नु कारण सुन्दा तपाइलाई अचम्म पनि लग्न सक्छ ।यसको पछाडि पनि एउटा रोचक र तार्किक कारण रहेको छ ।
तपाईलाई यो त थाहै होला कि कुकुरहरुको आ-आफ्नो इलाका रहेको हुन्छ । त्यसैले कहिलेकाही यो पनि देख्नुभएको होला कि कुनै एक ठाउँमा कतैबाट एक अन्जान कुकुर आयो भने त्यस ठाउँको कुकुरले त्यसलाई लखेट्ने गर्छन् ।
वास्तवमा कुकुरले आफ्नो नाकको उचाइमा पिसाब फेर्दछ । ता कि उसले अन्य कुकुरका लागि आफ्नो गन्ध छाड्न सकोस् । कुकुरले आफ्नो इलाकाका विभिन्न ठाउँमा रहेका रुखका फेँद, पिल्लर, खम्बा, भित्ता तथा गाडीका टायर आदिमा पिसाब फेरेर आफ्नो इलाका तय गरेको हुन्छ । यसरि आफ्नो इलाकाको बारेमा अन्य कुकुरलाई जानकारी प्रदान गर्नको लागि कुकुरले त्यसरी पिसाब गर्ने गर्दछ ।